ezaposwa ngomhla 09 / 12 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Ifomula yolwakhiwo lwekhompawundi ineesomers ezimbini: i-S kunye ne-R. Zombini zinefuthe elihle kwi-psyche njenge-antidepressant. Nangona kunjalo, i-R-isomerom yomelele, kuba, ngokuchaseneyo nefomathi ye-S, ukongeza ichaphazela imisebenzi enjengememori kunye nentetho. Isebenzisa unxibelelwano lwe-neural kwingqondo, iphucula ukuhlanganiswa kwe-RNA, ibonelela ngeyona nto ibonelela ngegazi. Kukho uhlobo lwesithathu lwe-phenylpyrazetam (phenotropil) - SR. Ngumxube wobuhlanga wazo zombini iisomers, odibanisa iipropathi zabo. Okwangoku, i-R-isomer emsulwa yeyeza ayifumaneki ukuba ithengiswe. Ke ngoko lumka ukuba uthenge i-phenylpyricetam iya kuba nefuthe elibuthathaka. Ukuba idosi yanele, mhlawumbi le yindlela ye-S yekhompawundi. Iimveliso zethu ziqulethe ifom ye-SR, kwaye inayo zonke izibonelelo zeziyobisi.
Mhlawumbi i-phenylpyracetam inokubizwa ngokuba yenye yezona ziyobisi zinamandla ze-nootropic zexesha lethu. Yenziwe ngokuchanekileyo ukuba ibe nefuthe elinamandla kwizifo ezinzulu ezinxulunyaniswa nokuphazamiseka kwememori, intetho, okanye ukulungelelaniswa kokuhamba. I-Phenylpyracetam iphindaphindwe amaxesha amaninzi ifomula eyandisiweyo, eyaziwa ukusukela ngexesha leSoviet Union yezinto ezibizwa ngokuba yi "pyracetam." Ukongezwa kweqela le-phenyl kunegalelo kuphuculo kwi-pharmacokinetics yeyeza (umzekelo, ukungena okucacileyo nangakumbi kuthintelo lwegazi-lobuchopho), olwenza lube namandla kwaye lukhawuleze.
Phenylpiracetam powder - Iziphumo ebezingalindelekanga kunye nokungqinelana
Siyakholelwa ukuba nokuba uxelelwa njani ukuba "iyeza likhuselekile ngokupheleleyo," asikukhuthazi ukusetyenziswa kwalo ngaphezulu kweeveki ezi-3, nalo liyakuphelisa ngenxa yee-neurotransmitters ezisebenza ngesantya esiphezulu. Ngapha koko, ngokoluvo lwethu, kungcono ukusebenzisa i-phenotropic episodically, okanye izifundo zeeveki ezingama-2-3 kwaye uyiphathe njenge "Turbo Mode".
Kuye kwafunwa ukuba ubunzima bomntu budlala indima ebalulekileyo ukuba ungaphantsi kwe-70 kg: ithebhulethi enye (1 mg) rhoqo kusasa, ukuba akukho ziphumo, yongeza enye, okanye ngaxeshanye, okanye kwiiyure ezingama-100-2 .
1. Kwiiyure ezi-5-6. Imibala ikhanya ngakumbi, amandla, uxinzelelo. Akukho luvuyo, uya kuziva uqokelelwe kwaye uzimisele, kodwa oku uya kukuqonda kuphela xa umphumo weziyobisi uphelile. Ixesha eliphakathi “kocinga ukukwenza” lifinyeziwe, kwaye ngalo mzuzu kungcono ungazenzi iimpazamo. Intetho iyakhawuleza, ndifuna ukuthetha ngayo yonke into, kodwa ukuba akukho zindlebe zongezelelweyo, funda, ubhale, inkqubo, ekugqibeleni. Esinye isiphumo esinomdla kakhulu- ndifuna ukuba wonke umntu athethe ngokukhawuleza okanye uyifunde ngokukhawuleza incwadi ukuze utye amanye amagama. Iimbaleki nazo ziyavuya.
2. Kwiintsuku ezili-10 ukuya kwezi-14. Imemori kunye nobungqina buphuculwe kancinci, njengoko kunjalo nge-nootropics yesiqhelo. Amaphupha aqhakazileyo e-FullHD asuswe, ke unokuziqhelanisa "namaphupha akhokelwayo".
Emva kwemizuzu engama-20-60, kuxhomekeke kwimetabolism (imetabolism). Isiphumo seNootropic - emva kweentsuku ezili-10 ukuya kwezi-14.
I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-2021
I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-Armodafinil Imibuzo ye-8 ukuzibuza ngaphambi kokuba uthathe i-Cetilistat powder